ITUNES ကိုမဓာတ်ပုံကို TAB ကို - ITUNES ကို - 2019
အဓိက ITunes ကို
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ "ဓာတ်ပုံ" ဖော်ပြရန်ပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန် iTunes ကိုအတွက်ဓါတ်ပုံများ၏, အဖြစ် troubleshooting အပိုင်း
အရည်အသွေးမြင့်မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, စမတ်ဖုန်း ပို. ပို. အသုံးပြုသူများက Apple က iPhone အတွက်ပုံရိပ်တွေ၏ဖန်ဆင်းခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရတော့တယ်။ ဒီနေ့ iTunes ကိုရှိ "ဓါတ်ပုံများ" အပိုင်းအကြောင်းကိုပိုမိုပြောဆိုပါ။
iTunes ကို - Apple က-devices များနှင့်သိုလှောင်မီဒီယာအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲခြင်းများအတွက်ရေပန်းစားပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ယင်းအစီအစဉ် device ကိုကဂီတ, ဂိမ်းများ, စာအုပ်များ, apps များနှင့်သင်တန်း၏, ဓါတ်ပုံများထံမှလွှဲပြောင်းအသုံးပြုသည်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ iPhone ကိုမှဓာတ်ပုံများလွှဲပြောင်းနည်း
1. ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ iTunes ကိုဖွင့်ပါနဲ့ USB-cable သို့မဟုတ် Wi-Fi ကိုထပ်တူပြုခြင်းကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ iPhone ချိတ်ဆက်ပါ။ ဘယ်အချိန်မှာ device ကိုအောင်မြင်စွာသေးသေးလေး devices များရဲ့ icon ကို click ပါ, အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်ရှိ Program ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။
2. ပြတင်းပေါက်၏လက်ဝဲ pane ထဲကခုနှစ်တွင် tab ကိုသွားပါ, "ဓာတ်ပုံ"။ ဒီနေရာတွင်အမှတ်အနားမှာတစ်ဦးကို tick ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် "ထပ်တူကျအောင်"ထို့နောက်အတွက် "မှဓာတ်ပုံများကူးပါ" သငျသညျ iPhone ကိုမှလွှဲပြောင်းရန်ချင်တဲ့ဓါတ်ပုံတွေသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုသိုလှောင်သောကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖိုလ်ဒါကိုရွေးပါ။
3. သင်တစ်ဦး folder ကိုရှေးခယျြထားလျှင်အမှတ်အနားမှာသင်သည်လည်းကော်ပီကူးဖို့လိုပါတယ်ဗီဒီယိုများ, အောက်ပိုင်းကို tick ပါရှိသည် "သီခငျြးမြားနှငျ့ဗှီဒီယိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန် Add"။ စာနယ်ဇင်းများ "Apply" ထပ်တူစတင်ရန်။
ကွန်ပျူတာကို iPhone မှဓာတ်ပုံများလွှဲပြောင်းနည်း
သင်ဤအသုံးပြုမှုအတွက် iTunes က program ကိုမရှိတော့လိုအပ်ကြောင့်, သင့်ကွန်ပျူတာမှဓာတ်ပုံများလွှဲပြောင်းရန် Apple က-devices များနှင့်အတူရန်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အမှုအရာပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင့်ရဲ့ iPhone ကို USB-cable ကိုကနေတဆင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်, ပြီးတော့ Windows Explorer ကို click လုပ်ပါ။ Windows ကိုခုနှစ်တွင် devices များနှင့် drives တွေကိုအကြား Explorer ကို, သင်သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းတွင်ရရှိနိုင်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအတူအပိုင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်သည့်ပြည်တွင်းရေး folder ထဲမှာဖြတ်သန်း, သင့်ရဲ့ iPhone (သို့မဟုတ်အခြားကိရိယာ) ကိုပြပါလိမ့်မည်။
"ဓာတ်ပုံ" အပိုင်း iTunes ကိုတှငျအဘယျပေါ်လာမပါဘူးဆိုရင်?
1. သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို iTunes က၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းရှိပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ လိုအပ်သောလျှင်, update ကို program ကို run ။
ငါဘယ်လိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ iTunes ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ဘူး
2. ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ။
3. ပြတင်းပေါက်၏အပေါ်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အပြည့်အဝမျက်နှာပြင်ဖို့ iTunes ကိုပြတင်းပေါက် Expand ။
အဘယ်အရာကိုအိုင်ဖုန်းမှာ Windows Explorer ကိုပြသသည်မဟုတ်ဆိုရငျကော
1. ယင်းကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါကသင်၏ Anti-virus ကို disable, အဲဒီနောက် menu ကိုဖွင့်လှစ် "Control Panel ထဲက", ပစ္စည်းရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာထား "Small Icons"ပြီးတော့စာရင်းထဲမှပြောင်းလဲ "ဖုန်းများအတွက်နှင့်ပုံနှိပ်".
2. ပိတ်ပင်တားဆီးမှု အကယ်. "အဘယ်သူမျှမပြန်ကြားရေး" မောင်းသူသည်သင်၏ gadget ကပြသ, ပေါ်မှာ mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်နဲ့ pop-up Context Menu ကကိုကလစ်နှိပ်ပါကို select "ဟုအဆိုပါ device ကို Remove".
3. ကွန်ပျူတာထဲကနေ Apple က-gadget ကဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်လည်ချိတ်ဆက် - စနစ်ဒရိုင်ဘာ၏အလိုအလျှောက် installation ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့အများစုဖွယ်ရှိ Display ရဲ့ကိရိယာနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းပါလိမ့်မည်။
သငျသညျကို iPhone-image ကိုတင်သွင်းတင်ပို့ဖို့ related မဆိုမေးခွန်းများရှိပါကမှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ။
ဗီဒီယို Watch: နတမကမရ ဗလခပနအမပတကအတင ဓတပကဗဆငပပပ (စက်တင်ဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © ITunes ကို 2019